Momba - Sekolin'ny Fiteny Afovoany, Cambridge
Momba ny Sekolinay
Ny Sekolinay dia natsangana tamin'ny taona 1996 nataon'ny vondrona kristiana iray tao Cambridge. Manana laza tsara izahay amin'ny fikarakarana tena tsara sy ivelan'ny efitrano fianarana. Mpianatra maro no milaza fa toy ny fianakaviana iray ilay sekoly.
Manakaiky ny fivarotana an-tanàna, trano fisakafoanana, tranombakoka, oniversite ao amin'ny Oniversiten'i Cambridge sy gara fitobiana izahay. Eo akaikin'ny fiangonana vato tsara tarehy izahay.
Ny tanjonay dia ny hanome anao ny fandraisana tsara sy ny fotoana tsara indrindra hianarana ny teny Anglisy amin'ny tontolo milamina sy sariaka. Ny fianarantsika dia mihazakazaka mandritra ny taona ary afaka manomboka amin'ny herinandro ianao. Manolotra fanomanana fanadinana koa izahay. Ny olon-dehibe ihany no ampianarintsika (manomboka amin'ny taona 18 farafahakeliny).
Mpianatra avy amin'ny firenena 90 mahery no nianatra taminay ary matetika misy fifangaroana zom-pirenena sy asa ao amin'ilay sekoly. Ny mpampianatra rehetra dia mpandahateny zanatany ary mahafeno fepetra ny CELTA na ny DelTA.
Izahay dia mitantana ny sekoly araka ny fitarihan'ny governemanta UK sy ny anglisy UK, izay fitandremana ilaina rehetra mba hialana amin'ny fiparitahan'ny Covid-19.
Tizy sekoly dia fikambanana mpanao asa soa voasoratra anarana (Reg No 1056074) miaraka amin'ny filankevi-pitokisana izay miasa araka ny fahaizan'ny mpanolo-tsaina. Ny talen'ny fandalinana sy ny Administratera zokiny dia tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana isan'andro ny sekoly.
Fankatoavana ny filankevitra britanika
'Ny Vaomiera Britanika dia nijery sy nahazo alalana tamin'ny Cambridge afovoan'ny Kilonga tamin'ny Aprily 2017. Ny Scheme Accreditation dia manombana ny fari-pitsipika momba ny fitantanana, ny loharano ary ny trano, ny fampianarana, ny fifanampiana ary ny fikambanana mifanaraka amin'ny fitsipika ankapobeny amin'ny faritra voamarina (jereo www.britishcouncil.org/education/accreditation ho an'ny antsipiriany).
Ity sekoly ity dia manome fianarana amin'ny teny anglisy ho an'ny olon-dehibe (18 +).
Ny tanjaka dia voamarika eo amin'ny sehatry ny antoka antoka, ny akademika, ny fikarakarana ny mpianatra, ary ny fialam-boly.
Ny tatitra fanaraha-maso dia nilaza fa ny fikambanana dia nifanaraka tamin'ny fenitry ny Scheme. '
Fanaraha-maso manaraka ny taona 2022
Cambridge dia malaza manerantany noho ny oniversite, ny tantara, ny hatsarany, ny hatsarany ary ny fiainam-pianarany. Tsidiho ny oniversite ary...	Hamaky bebe kokoa
Ny fanoloran-tenan'ny Central Language School dia ny manampy anao hanararaotra tsara ny fotoanao any Cambridge, mankafy ny anao...	Hamaky bebe kokoa
Ireto misy hetsika sasany ampidirinay matetika, na dia miankina amin'ny fameperana Covid-19 aza izy ireo ankehitriny...	Hamaky bebe kokoa